Double-hurongwa kombiyuta sandara knitting muchina - China Taizhou Boding Machinery
Computer sandara knitting Machine
Shoes yokumusoro vamp nokuparira Machine
Double-hurongwa kombiyuta sandara knitting Machine
DZ252S ndiyo 52 nemainji pamwe chete ngoro miviri hurongwa kuroorwa chinotenderera, devicde pamwe kumusoro-nzvimbo chinotenderera kusangana Makakatanwa chinodiwa kuti haasaruri knitting .Equipped pamwe michini Achicherechedza aramu hurongwa, anogona zvinobudirira kudzivisa zvisipo aramu uye tsono corners. Izvi deviced pamwe akazochena nepurogiramu uye michini Switch chete kuona knitting nzvimbo kudzivisa Miss anovhundutsa. Dzokai vagari nemauto achipindira injini, kuwedzera pechingoro kudzoka nokukurumidza uye kwezvinhu uyewo kunzvenga Worn kuti ...
DZ252S ndiyo 52 nemainji pamwe chete ngoro miviri hurongwa kuroorwa chinotenderera, devicde pamwe kumusoro-nzvimbo chinotenderera kusangana Makakatanwa chinodiwa kuti haasaruri knitting .Equipped pamwe michini Achicherechedza aramu hurongwa, anogona zvinobudirira kudzivisa zvisipo aramu uye tsono corners. Izvi deviced pamwe akazochena nepurogiramu uye michini Switch chete kuona knitting nzvimbo kudzivisa Miss anovhundutsa. Dzokai vagari nemauto achipindira injini, kuwedzera pechingoro kudzoka nokukurumidza uye kwezvinhu uyewo vadzivise Worn wenhumbi njanji.
With digitaalinen ano, kuzadzisa mifananidzo kuchinjwa, pointel, Tuck, intarsia, jacquard, kaviri jersery mubani, pachena chimiro yakavanzika chimiro uye dzimwe nguva muenzaniso knitting mabasa. Yakabatana zvinhu kuroorwa kana kaviri Jersey, kwemashifiti multi-mavara jacquard, intarsia, netambo, pointel jira. Yakanakira nesirika, kemikari faibha, shinda, acrlic faibha zvakavhenganiswa mutsvuku, donje yakapfava kuruka ari juzi, chipika, placket, mupendero, cuff, sikavha, muhomwe, unokutakwairirai, uye dzimwe knitting jira.
Tsono / Width 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Main Rinoshanda Yakabatana zvinhu kuroorwa kana kaviri Jersey, kwemashifiti multi-mavara, jacquard, intarsia, netambo, pointel jira yakakodzera nesirika, kemikari faibha, shinda acrylic faibha zvakavhenganiswa mutsvuku, donje yakapfava kuruka ari juzi, chipika, placket, mupendero, cuff, sikavha , muhomwe, unokutakwairirai, uye, dzimwe knitting jira.
Knitting System Single chekufambisa miviri gadziriro kana zvitatu hurongwa, pamwe digitaalinen ano, kuzadzisa mifananidzo kuchinjwa, pointel, Tuck, intarsia, jacquard, kaviri jersery mubani, appaent chimiro, yakavanzika chimiro uye dzimwe nguva muenzaniso Knitting mabasa.
Knitting Speed Max knitting havukavu 1.6M / S. 32 havukavu zvikamu kudzora servo injini.
Sitch Density 64 arambe achirema kusarudzwa siyana 0-650 nemauto achipindira injini, zvemagetsi yakaisvonaka chinja rwokugadzira.
Dynamic Musono Deviced ne simba Musono michina, vabudirire siyana stitches mune imwe kosi uye kusiyana arambe achirema mune imwe kosi kuti kuvandudza kniing efficency uye zvakasiyana-siyana.
rumbabvu chinja Free transter miviri nzira pakati mberi uye shure eedle panguva iyoyo uye hapana kukamurwa kuti mungoro kufamba. Uchatamisa uye wakabatanidzwa nomumwe.
Sinker Achipindira gwenya kudzora chinjika sinker kuti vabudirire vakawanda ikoko zvinoumba uye anokudza ushande.
Single Or Double Rackings Motor nemotokari anonetsa zvikuru, kuzadzisa 1/2 kana 1/4 tsono anonetsa zvikuru chero nzvimbo. Double acking Max 2,5 nemainji rimwe divi uye kaviri mativi Max 5 nemainji, deviced musi 5G, 7G, uye 5 / 7G muchina. Single anonetsa zvikuru Max 2inches, deviced musi 9G, 12G, 14G, uye 16G muchina.
High Speed ​​Return Dzokai joine nemauto achipindira injini, kuwedzera pechingoro kudzoka nokukurumidza uye productiviy uyewo vadzivise Worn wenhumbi njanji.
Roller mudziyo DZ252S deviced pamwe tora pasi muzinga uye kumusoro-nzvimbo chinotenderera, DZ252S deviced pamwe kumusoro-nzvimbo oller; 24sections ose otomatiki kuzvidzora pamwe subsection kuchinja .Fulfil hwakakwana pasi rejira chipini uye makakatanwa anodiwa portionable knitting.
mutsvuku Roller Positive mutsvuku chinotenderera chaizvo kudzora te kusungika pakati rwebhuruu kuti gurantee chinokosha yepamusoro.
mutsvuku Carrier 2 * 8 rushava vatakuri deviced 4 kaviri kumativi atungamirire njanji.
chengetedzo Full muchina pabutiro kuderedza noice kuna guruva. Cover Switch, kukurumidza bhatani, simba kure mudziyo uye chakarurama kuti pave vakachengeteka.
Auto Stop Machine car chichiita apo mutsvuku kwemasikati, rushava vadyi aina, rejira rwakapetwa mukati, tsono raparadza, zadzisa, chirongwa kukanganisa chirongwa kuguma zvaitika.
tsono Detector Vaine michini Achicherechedza aramu hurongwa, anogona zvinobudirira kudzivisa zvisipo aramu uye tsono corners.
Computer System LCD tarisisa, musabata nechidzitiro, graphical inowanikwa, USB uye mambure imput, 1GB gondohwe guru faira chekuchengeta.Monitor: Kushanda data, Musono mashoko Manyiminya uye chinjika panguva kugadzirwa yakakodzera oparesheni.
Program maitiro uye muchina yekombiyuta nyore kuti dzifambirane uye kutsigira CNT / HCD / OOO muenzaniso faira.
Multiple hurongwa mutauro mashandiro inosanganisira Chinese, Chirungu uye nemimwe mitauro.
File Inzwa Zvinotaurwa USB uye mambure
Power Off Memory Deviced mazhinji CMOS zvigadzirwa, kana simba zvichiitika kubva knitting Data uye faira anoponeswa kuti restart knitting.
Net Connection High nokukurumidza (Ethernet), kunonyanyisa batanidza 254 michina kuti faira chiyamuro kuzadzikisa monior uye date kugoverana.
divi (Double maitiro) L * W * H 2915 * 940 * 2010mm, (Three maitiro) L * W * H3015 * 940 * 2010mm
simba AC 220V / 380V Frequency: 50HZ / 60HZ Power: 1.5KW / 2KW
Previous: Single-hurongwa kombiyuta sandara knitting Machine
Next: Three-maitiro shangu yokumusoro vamp nokuparira Machine
6f 144n nekombiyuta Sock MUMUSANGANO Machine
Auto Flat yakabatana Machine
Auto chitsitsinho Upper-Unosungira Machine
Backpart paaivaumba Machine
chipika Flat Knitting Machine
Chipika Making Machine
Computer kudzorwa Knitting Machine
Computer Flat yakanyatsobatana Machine With Sinker
nekombiyuta Flat Bed Knitting Machine
nekombiyuta Jacquard Knitting Machine
nekombiyuta Scarf Flat wakabatanidzwa Machine
Nekombiyuta Weaving Machines
Cylinder Die Kucheka Press Machine
Jira For juzi Making Machine
Flat yakanyatsobatana Machine With Sinker
Flat Knitting Machine With Kutsinhira Good
Zvizere Jacquard Flat Bed Knitting Machine
Zvizere Jacquard Flat wakabatanidzwa Machine
Zvizere Knitting Machine
Good Quality juzi Computer Knitting Machine
Heat MUMUSANGANO Machine
Home nekombiyuta Knitting Machines
Rakanga rakapfeka zvinovhara kumeso juzi Making Machine
Industrial Glove Kuita Machine
Insole Unosungira Machine
Machine For patapata Upper
Manual juzi Knitting Machine
Men juzi Polo Kuita Machine
Multi Gaug E Industrial Flat wakabatanidzwa Machine
Simba Hat Machine
Pu Leather nekusimbisa, nebefu Machine
Single chekufambisa Double System
Sungai Knitting Machine
juzi Computer Knitting Machine
juzi Flat Knitting Machine
Juzi Men Kugadzira Machine
Upper achabatanidza Machine
Upper Lining achabatanidza Machine
Upper nokuipisa noutsi hwemvura Machine
Shinda Scarf Making Machine
Hongu Computer Knitting Machine
Single-hurongwa kombiyuta sandara knitting Machine